Sidee ayay AS Roma u sammeysay 30kii daqiiqo ee ugu xumaa taariikhda kubbada cagta? – Garsoore Sports
Sidee ayay AS…
Sidee ayay AS Roma u sammeysay 30kii daqiiqo ee ugu xumaa taariikhda kubbada cagta?
Kooxda kubbada cagta AS Roma waxaa laga yaabaa in laga reebay koobka Coppa Italia fiidnimadii Talaadada, laakiin waligood ayey ku sii negaan doonaan qalbiyadeenna, kaddib markii ay soo saareen mid ka mid ah 30-kii daqiiqo ee ugu xumaa ee taariikhda kubbadda cagta.
Giallorossi waxay garoonka Stadio Olimpico kusoo dhoweysay kooxda Spezia wareega 16ka ee tartanka Coppa Italia, waxay ahayd inay si toos ah ugu gudubto wareega 8da maadaama Spezia ay tahay koox yar oo ka cararaysa iney u dhaadhacdo heerka labbaad ee horyaalka Talyaaniga, balse waa ay yaseen.
Taa bedelkeeda, waxay isu beddeshay mid ka mid musiibooyinkii ugu weynaa oo ay koox maleysan karto, taasoo sababtay in tababare Paulo Fonseca uu qarka u saarmo in laga ceyriyo shaqada kooxda.
Haddaba, maxaa ka qaldamay Roma kulankan taariikhiga ah?
2:2 ayay ku dhammaatay waqtiga caadiga ah
Xaqsoor ahaan, astaamaha digniinta waxay kujireen foorida koowaad. Roma ayaa si layaableh laba gool loogu lahaaday 15ka daqiiqo ee furitaanka cayaarta, taasoo u reebtay shaqo badan oo ay qabato. Hayeeshee, taasi waa billowga musiibadii markii dambe dhacday.
Wiilasha macalin Fonseca ayaa dib ugu soo laabtay H cayaarta kaddib markii ay Pellegrini iyo Mkhitaryan barbareeyeen goolashii lagu lahaa kooxdooda, weeraryahanka Roma Borja Mayoral ayaa seegay labo fursadood oo waa weyn si uu u dhammeystiro soo laabashada, isla markaana uu kooxdiisa boos uga helo wareega xiga ee tartankan.
Cayaartu waxay noqotay in lagu daro waqti dheeri ah maadaama 2:2 la isla dhaafi waayay 90ka daqiiqo. Halkanna waa halka uu Roma hoogga uga billaabmayo.
Waqtiga dheeriga ah: Laba kaar oo casaan ah … daqiiqad gudaheed
Daqiiqadii ugu horreysay ee 30-ka dheeriga ah, daafac Gianluca Mancini ayaa u bareeray loolan halis ah, isagoo celiyay cayaaryahan Spezia ka tirsan oo ku ordayay wadadiisa, taasoo dhalisay in loo taago kaarka labbaad oo jaale ah (casaan).
Hadda waa 10 nin, Roma ma awoodo inay qalad doqoniimo ah sameyso.
Balse hore u sii soco 20 ilbiriqsi oo buuxa.
Spezia ayaa laad xor ah heshay taasoo ay si toos ah u cayaartay, Goolhayaha Roma Pau Lopez ayaa ka soo baxay goosha isaga oo isku dayaya inuu laad karate ah oo duulaya uu ku dhufto kubbada si uu isaga saaro.
Nasiib darrose, cayaaryahanka reer Spain ayaa gebi ahaanba bartilmaameedsaday cayaaryahan Spezia ka tirsan, isagoo ku sigtay inuu qudha ka jaro weeraryahanka kooxda Spezia, Garsooruhu ma heysan doorasho kale oo aan aheyn inuu bixiyo laad xor ah, iyo sidoo kale casaankii labbaad daqiiqad gudaheed.
Dhammaadka cayaarta: Roma 2-4 Spezia
Haatan waxay Roma waxay wajaheysaa 28 daqiiqo oo kale oo ay la socdaan sagaal nin oo kaliya iyo goolhayaha dooqa seddexaad, cayaaryahanadooda ayaa darbiga dhabarka u jeediyay. Wiilasha macalin Fonseca ayaa sameeyay wax walba oo ay kari karaan, laakiin waxaa cayaarta dib loo roggay labo daqiiqo markii ay socotay 15kii daqiiqo ee ugu dambeeyay waqkhtiga dheeriga ah, Cayaaryahan Daniele Verde ayaa dhaliyay gool uu hoggaanka ugu dhiibay kooxdiisa Spezia.
Waxaa xusid mudan, in Gooldhaliyahan uu kasoo baxay akaadeemiyada kooxda Roma wuxuuna u yimid inuu ciqaabo kooxdii uu kusoo barbaaray oo sakaraadsan.
Si kastaba ha noqotee, jirdilku halkaa kuma ekaan. cayaaryahan Riccardo Saponara ayaa Roma dilay daqiiqadii 119, isagoo ka dulqaaday jafta loo yaqaano ‘Francecso Totti-esque chip’ si uu u ceebeeyo goolhayahe Daniel Fuzato oo taagan , isla markaana uu soo gabagabeeyo mid kamid ah habeenaddii ugu madoobaa ee taariikhda kooxda Roma.
Balse Cayaarta Forfeit ayaa laga dhigay: Roma 0:3 Spezia…… Maxaa dhacay?
Kooxda Roma ayaa sammeysay qalad intii ay socotay qeybtii dambe ee wakhtiga dheeriga ah, waxay sameeeyeen badalkii 6aad ee cayaarta.
Kabtan ku xigeenka Roma Lorenzo Pellegrini ayaa ahaa ninka kaliya ee umuuqday inuu dareemay qaladkan, isagoo si isdaba joog ah ugu wargaliyay macalin Fonseca iyo shaqaalihiisa inay qarka u saaran yihiin inay badal lixaad sameeyaan, laakiin codsigiisu ayay iska dheggo tireen.
siddaa darteed cayaarta markay idlaatay ayaa loo sheegay Roma inay Forfeit galeen oo 0:3 looga adkaaday halkii looga adkaan 2:4
Si kastaba, kooxda Roma ayay xilli cayaareedkan u tahay markii labbaad oo natiijo Forfeit ay ku qaadato.
Pellegrini knew. He repeatedly said to the bench: "This is the sixth, you know…" #RomaSpezia #CoppaItalia #ASRoma https://t.co/pp8FIsgVdF
Halkan hoose ka daawo goosgooska kulanka:
Waa kuma daafaca aadka loola xiriirinayo Man United?
Muxuu tababare Klopp ka yiri xaaladda dhaawac ee Van Dijk?